Somaliland oo Xabsiga dhigtay gabadh u hanjabtay M/weynaha Mareykanka. – Puntlandtimes
June 6, 2019 W LAASCAANO
HARGEYSA(P-TIMES)- Laamaha Ammaanka ee Somaliland ayaa la xaqiijiyey in ay Isniintii todobaadkan xabsiga u taxaabeen Nasiima Maxamed Nuur oo dhawaan muuqaal laga baahiyey warbaahinta gudaha aad ugu hanjabtay Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump.
Somaliland ma sheegin sababata keentay xariga loo geystay Haweeneydan oo u muuqatay mid hadashay uun, balse wararka ayaa sheegaya in ay wax ka sheegtay madaxda dalalka Sacuudiga & Imaaraatka Carabta oo xariir kala dhaxeeyo Somaliland.
Ma jirto cid madax banaan oo xaqiijisa xariga Nasiima Maxamed Nuur, balse wararka ayaa tibaaxaya in xarigeeda ay amartay Wasaaradda Arrimaha gudaha ee maamulka Somaliland.
Haweenaydan waxay u muuqatay mid heelo buuxda u muujisay dawladda Iiraan oo ay ishayaan Imaaraatka Carabta, Sacuudiga, Baxreyn, Mareykanka oo isku dhinac ah, waxaana ay sheegtay in ay difaaci doonto danaha Iiraan.
Dad-badan ayaa rumeysan in Haweeneydan ay ka tirsan tahay Urur diimeedyada Shiicada Iiraan, kuwaas oo saameyn ku yeelanayay Soomaaliya sannadyadii u dambeeyey, waxayna aad uga hadashay oo ay ku celcelisay in ay Iiraan tahay dawlad Islaami ah.